Metformin vs. metformin ER: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो हो - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस खेलहरु
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> Metformin vs. metformin ER: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो हो
Metformin vs. metformin ER: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो हो
मेटफर्मिन एक सामान्यतया निर्धारित औषधि हो जसलाई टाइप २ मधुमेह मेलिटसको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक एन्टिडाइबेटिक एजेन्ट हो जुन बिगुआनाइड्स भनेर चिनिने औषधिहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ। यसले कलेजोमा ग्लूकोज (रगत चिनी) उत्पादन घटाएर, आन्द्रामा ग्लूकोजको शोषण घटाउने, र इन्सुलिन संवेदनशीलता बढाएर काम गर्दछ। मेटफर्मिनले शरीरको टिश्युहरूमा ग्लूकोजको मात्रा बढाउँदै इन्सुलिन संवेदनशीलतालाई सुधार गर्दछ।
टाइप २ मधुमेह मेलिटस निदान गरिन्छ जब शरीर ईन्सुलिनको प्रभाव प्रति प्रतिरोधी हुन्छ। इन्सुलिन अनिवार्य हर्मोन हो जुन पनक्रियाद्वारा उत्पादित हुन्छ र शरीरको कोषहरूमा उर्जाका लागि ग्लूकोज ढुवानी गर्न प्रयोग हुन्छ। जब शरीरले इन्सुलिन राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैन, रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ जसले रक्त नलीहरू र स्नायुहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। उचित उपचार बिना, मधुमेह हुन सक्छ जटिलताहरु र मुटु र मिर्गौला जस्ता अंगहरूमा क्षति।
Metformin तत्काल रिलीज (IR) र विस्तारित रिलीज (ER) फारममा उपलब्ध छ। जबकि दुवै प्रकारको मेटफर्मिनले एक समान सक्रिय घटक समावेश गर्दछ, ती बिभिन्न तरिकाहरूमा लिइन्छन्। उनीहरूको साइड इफेक्टमा पनि केही भिन्नताहरू छन्।
मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
मेटफोर्मिन वा मेटफर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ग्लुकोफेजको सामान्य नाम हो। तत्काल रिलीज मेटफॉर्मिन प्राय: 500 मिलीग्राम ट्याब्लेट खानाको साथ दैनिक रूपमा दुई पटक लिइन्छ। त्यहाँ 850० मिलीग्राम ट्याब्लेट पनि छ जुन दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ। मेटफर्मिनको अधिकतम खुराक प्रति दिन २5050० मिलीग्राम विभाजित खुराकहरूमा हुन्छ। मेटफर्मिनले वयस्क र बच्चाहरू दुबैमा टाइप २ मधुमेहको उपचार गर्न सक्छ।
मेटफॉर्मिन ईआर ग्लुकोफेज XR ब्रान्ड नामबाट पनि परिचित छ। यो मेटफोरमीनको विस्तारित-रिलिज संस्करण हो र खानाको साथ दैनिक एक पटक मात्र लिनु पर्छ। मेटफर्मिन ईआरको अधिकतम कुल दैनिक खुराक २००० मिलीग्राम हो। तत्काल रिलीज मेटफोर्मिनको विपरीत, मेटफर्मिन ईआर केवल टाइप २ मधुमेह भएका वयस्कहरूको लागि मात्र संकेत गरिन्छ। यसका कम साइड इफेक्ट पनि छन् र नियमित मेटफर्मिन भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ।
सम्बन्धित: मेटफर्मिन विवरणहरू मेटफॉर्मिन ईआर विवरणहरू
मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर बीच मुख्य भिन्नता
मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन ईआर
औषधि वर्ग Biguanide Biguanide
ब्रान्ड नाम के हो? ग्लुकोफेज ग्लुकोफेज एक्सआर, फोर्टैमेट, ग्लुमेटा
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज
मानक खुराक के हो? Mg०० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक वा 5050० मिलीग्राम एक पटक भोजनको साथ 500 मिलीग्राम एक पटक साँझको खानाको साथ
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? मधुमेह व्यवस्थापन को लागी दीर्घकालीन मधुमेह व्यवस्थापन को लागी दीर्घकालीन
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र १० बर्ष र माथिका बच्चाहरू वयस्कहरू
सर्तहरू metformin र metformin ER द्वारा उपचार
दुबै मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर टाइप २ मधुमेह मेलिटस प्रबन्ध गर्न एफडीए-अनुमोदित छन्। यस अनुसार अमेरिकी मधुमेह संघ (एडीए) , metformin टाइप २ मधुमेह को लागी पहिलो लाइन को उपचार हो। A1c भएका बिरामीहरूमा diagnosis% भन्दा कम निदानको समयमा, मेटफोरमीन प्रति मोनोथेरापीको रूपमा सुरु गर्नुपर्दछ। मधुमेहमा चिकित्सा सेवाको मानक । मेटफर्मिनले ग्लाइसेमिक नियन्त्रण सुधार गर्न र अन्ततः मधुमेहबाट उत्पन्न हुने जटिलताहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
मेटफर्मिन मात्र टाइप २ मधुमेह उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो अफ-लेबल उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती संग पूर्वानुमान र एक उच्च उपवास प्लाज्मा ग्लूकोज (FPG) मधुमेह को शुरुआत रोक्न मेटफोरमिन सिफारिस गर्न सकिन्छ। मेटफर्मिन सिफारिश गरिन्छ जब रगतमा चिनीको मात्रा डाइट र व्यायामले एक्लैले व्यवस्थापन गर्दैन।
मेटफर्मिनलाई गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटसको उपचार गर्नको लागि अफ-लेबल विकल्पको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको मधुमेह गर्भवती महिलाहरूमा देखा पर्दछ जो मधुमेह हुने खतरामा पर्दछन्। जे होस्, ईन्सुलिन सामान्यतया पहिला प्रयोग गरीन्छ।
Metformin पनि भएको छ अध्ययन पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिन्ड्रोम (POCS) को उपचार गर्न। यो सिन्ड्रोम सेक्स हार्मोन्स को असंतुलन द्वारा विशेषता हो जुन डिम्बग्रंथि अल्सर, मासिक धर्म चक्र परिवर्तन, गर्भावस्था मुद्दाहरू, एक्ने, र इन्सुलिन प्रतिरोधको परिणाम हुन सक्छ। मेटफर्मिन ईन्सुलिन प्रतिरोध घटाउन, टेस्टोस्टेरोनको स्तर घटाउन, र मासिक धर्म चक्रको साथै प्रजनन क्षमता सुधार गर्न सल्लाह दिन सकिन्छ।
एन्टीसाइकोटिक औषधिको प्रयोग, जस्तै ओलान्जापाइन, रिसपेरिडोन, र क्लोजापाइन, ले वजन बढाउन सक्छ। केही अध्ययनका अनुसार, मेटफर्मिन एन्टिसाइकोटिक-प्रेरित भारित वजनको उपचारको लागि प्रभावकारी देखाइएको छ। एउटा समीक्षाले मेटाफर्मिनले मद्दत गरेको पाए बडी मास इंडेक्स कम गर्नुहोस् (BMI), शरीरको वजन, र इन्सुलिन प्रतिरोधको तुलनामा एन्टिसाइकोटिक-प्रेरित भारित वजन भएका व्यक्तिहरूमा प्लेसबोको तुलनामा।
सर्त मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन ईआर
टाइप २ मधुमेह मेलिटस व्यवस्थापन हो हो
टाइप २ मधुमेह रोकथाम अफ-लेबल अफ-लेबल
गर्भवती मधुमेह mellitus अफ-लेबल अफ-लेबल
पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम अफ-लेबल अफ-लेबल
एन्टिसाइकोटिक थेरापीको कारण वजन अफ-लेबल अफ-लेबल
के मेटफर्मिन वा मेटफर्मिन ईआर अधिक प्रभावकारी छ?
टाइप २ मधुमेह मेलिटसको लागि मेटफोरमीन र मेटफर्मिन ईआर तुलना गर्ने अध्ययनको आधारमा मेटफर्मिन ईआर प्रभावकारितामा मेटफोरमीनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। वास्तवमा, मेटफर्मिन ईआर यसको कम साइड इफेक्ट प्रोफाइल र प्रयोगमा सजिलोको आधारमा नियमित मेटफोरमिन भन्दा राम्रो हुन सक्छ। टाइप २ मधुमेह मेलिटस भएकाहरू दुई पटकको गोलीको सट्टा एक पटक दैनिक मेटफोरमिन गोली लिने झुकाव बढी हुन्छ।
एक अनियमित मा, क्लिनिकल अध्ययन , मेटफर्मिन ईआर मेटफर्मिन आईआर भन्दा बढी प्रभावकारी पाइएको थियो टाइप २ मधुमेह भएका बिरामीहरूको उपचार गर्दा। मेटफर्मिन ईआर लिनेहरूले मेटफर्मिन आईआरको तुलनामा उत्तम ग्लाइसेमिक नियन्त्रण र लिपिड मेटाबोलिजमको अनुभव गरे।
अर्को अनियमित, डबल ब्लाइन्ड ट्रायल एक पटक दैनिक metformin ER नियमित metformin को समान प्रभावकारिता र सुरक्षा थियो। थप रूपमा, अध्ययनले मेटफर्मिन ईआरको साथ एक पटक दैनिक खुराकको फाइदा उल्लेख गरेको छ। दुबै मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआरले २ diabetes हप्तामा एचबीए १ सी स्तरमा सुधार ल्यायो जसले उनीहरूको मधुमेहको लागि अन्य कुनै उपचारको प्रयास गरेनन।
विस्तारित-रिलीज मेटफॉर्मिनलाई तत्काल रिलीज मेटफोरमिनमा रुचाउन सकिन्छ। यो सहिष्णुता भन्दा राम्रो देखाइएको छ यद्यपि यो तत्काल रिलीज ट्याब्लेट भन्दा महँगो पर्दछ। टाइप २ मधुमेह मेलिटसको लागि उपचार विकल्प छनौट गर्दा स्वास्थ्य उपचार पेशेवरबाट चिकित्सकीय सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
कभरेज र मेटफोरमिन बनाम मेटफर्मिन ईआरको लागत तुलना
मेटफोर्मिन ग्लुकोफेजको जेनेरिक संस्करण हो। जेनेरिक मेटफॉर्मिन मेडिकेयर भाग डी र अधिक बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। ब्रान्ड-नाम ग्लुकोफेज एकदम महँगो हुन सक्छ र retail १ above० भन्दा माथि औसत खुद्रा मूल्य लाग्न सक्छ। यो लागत फार्मेसीमा एक सिंगलकेयर छुट कार्ड ल्याएर कम गर्न सकिन्छ। मेटफर्मिन एकलकेयर कार्डले जेनेरिक तत्काल जारी विज्ञप्ति मेटमफॉर्मिनको -०-दिनको आपूर्तिको लागि लागतलाई $ down मा ल्याउन सक्छ।
लगभग सबै मेडिकेयर र बीमा योजना जेनेरिक मेटफॉर्मिन ईआर कभर हुनेछ। ब्रान्ड-नाम ग्लुकोफेज एक्सआर तपाई जानुहुने फार्मेसीमा निर्भर गर्दछ। 80 को लागत। एकलकेयर कूपन कार्डको साथ, जेनेरिक मेटफर्मिन ईआर एक पटक दैनिक मेटफॉर्मिन ईआर गोलीको -०-दिन आपूर्तिको लागि $ as भन्दा कममा किन्न सकिन्छ। बीमाको साथ पनि, एकलकेयरले कम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्दछ। तपाईको फार्मेसीको साथ जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाई सिंगलकेयरमा राम्रो छुटको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भने।
Prilosec र zantac बीच के फरक छ?
मानक खुराक Mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा) Mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0- $ 8 $ 0- $ 8
एकलकेयर लागत $4$ 4
मेटफर्मिन बनाम मेटफोर्मिन ईआरको साझा साइड इफेक्टहरू
मेटफर्मिनले साइड इफेक्टहरू पैदा गर्दछ जुन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) प्रणालीलाई प्रभावित गर्दछ। यी साइड इफेक्ट पखाला, मतली, बान्ता, ग्यास (पेट फूलना), अपच, र पेट असुविधा वा पेट अप्ठ्यारो समावेश छ। मेटफर्मिन आईआरले सामान्यतया थकान वा ऊर्जाको कमी (अस्थेनिया) को साथ साथै टाउको दुखाइ पनि निम्त्याउँछ।
मेटफर्मिन ईआरसँग मेटफर्मिनको तुलनामा कम साइड इफेक्टहरू छन्। मेटफर्मिन ईआरसँग सम्बन्धित सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू पखाला, मतली, र बान्ता हो। Metformin ER ले केहि मानिसहरुमा कब्ज को कारण पनि हुन सक्छ। यद्यपि मेटफर्मिन ईआरले अन्य जीआई साइड इफेक्टहरू जस्तै अपच र पेट फूलना निम्त्याउन सक्छ, यी साइड इफेक्टहरू नियमित मेटफॉर्मिनको तुलनामा अक्सर देखा पर्दैन।
मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआरको साथ हुन सक्ने अन्य साइड इफेक्टहरूमा चक्कर, लाइटहेडनेस, र स्वाद गडबडी समावेश छ। मेटफर्मिन र मेटफोर्मिन ईआरको अन्य अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा कलेजोको चोट र हाइपोग्लाइसीमिया (कम रक्त शर्करा) सामेल छ।
पखाला हो % 53% हो १०%
मतली वा बान्ता हो २%% हो %%
फ्याटुलेन्स हो १२% हो १% -5%
अस्थेनिया हो %% हैन -
अपच हो %% हो १% -5%
व्याकुल पेट हो %% हो १% -5%
टाउको दुखाई हो %% हो १% -5%
कब्ज हैन - हो १% -5%
स्वाद गडबडी हो १% -5% हो १% -5%
चक्कर आउने / हल्का टाउको हो १% -5% हो १% -5%
स्रोत: डेलीमेड ( मेटफॉर्मिन ), डेलीमेड ( मेटफॉर्मिन ईआर )
मेटफर्मिन बनाम मेटफर्मिन ईआरको ड्रग अन्तरक्रिया
मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआरले बिभिन्न विभिन्न औषधिहरूमा अन्तरक्रिया गर्न सक्छ। ड्रग अन्तर्क्रियाको अक्सर रगत ग्लुकोज परिवर्तन, एक जोखिम को वृद्धि परिणाम ल्याक्टिक एसिडोसिस , वा रगतमा मेटफोरमीनको संचय जसले प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
कार्बोनिक एनिहाइड्रेस इनहिबिटरहरू भनिने औषधिहरूसँग मेटफोरमिन लिनाले ल्याक्टिक एसिडोसिसको जोखिम बढाउन सक्छ, शरीरमा अत्यधिक ल्याक्टेटबाट सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था। यी औषधिहरूले अन्यमा टोपिरामेट र एसिटाजोलैमिड समावेश गर्दछ।
डल्युटेग्रावीर, सिमेटिडाइन, र रानोलाजाइन जस्ता ड्रग्सले मेटफर्मिनको क्लियरन्स कम गर्न सक्छ। यसले रगतमा मेटफोरमीनको उच्च स्तरको परिणाम दिन्छ र प्रतिकूल घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
अन्य औषधिहरू जस्तै मूत्रवर्धक, कोर्टिकोस्टेरोइड्स, फिनोथियाजाइन, एस्ट्रोजेन, मौखिक गर्भ निरोधक, र क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू ग्लूकोज नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्। मेटफर्मिनको साथ यी कुनै पनि औषधिको सेवन गर्दा हाइपरग्लाइसेमिया (खतरनाक रूपमा उच्च रगतमा चिनी) हुन सक्छ। इन्सुलिन वा सल्फोनीलुरिया वा मेटफोरमिनको साथ ग्लानाइड औषधि प्रयोग गर्नाले यसको जोखिम बढ्न सक्छ hypoglycemia ।
औषधि ड्रग क्लास मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन ईआर
Dichlorphenamide कार्बनिक anhydrase अवरोधकर्ताहरू हो हो
रानोलाजाइन शरीरबाट मेटफर्मिनको क्लियरन्स कम गर्ने औषधिहरू हो हो
इन्सुलिन इन्सुलिन हो हो
Nateglinide इन्सुलिन सेक्रेटोगोग्स हो हो
Ethcrynic एसिड डायरेटिक्स हो हो
हाइड्रोकार्टिसोन डेक्सामेथासोन फ्लुड्रोकोर्टिसोन Corticosteroids हो हो
Thioridazine फेनोथियाजाइन्स हो हो
लेवोथिरोक्साइन थाइरोइड औषधिहरू हो हो
डेसोजेस्ट्रल एस्ट्रोजेन र मौखिक गर्भनिरोधक हो हो
Phenytoin Antiepileptic हो हो
नियासिन निकोटीनिक एसिड हो हो
इफेड्रिन Sympathomimetic हो हो
Verapamil क्याल्सियम च्यानल अवरोधक हो हो
आइसोनियाजिड एन्टिबायोटिक हो हो
मेटफर्मिन बनामको चेतावनी। metformin ER
मेटफर्मिनले दुर्लभ मामिलाहरूमा ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन सक्छ। ल्याक्टिक एसिडोसिस तब हुन्छ जब रगतमा धेरै ल्याक्टेट हुन्छ। यो अवस्था कम रक्तचाप, हाइपोथर्मिया, र मृत्यु पनि हुन सक्छ। ल्याक्टिक एसिडोसिसका अन्य लक्षणहरूमा असामान्य कमजोरी, पखाला, पेट दुखाइ, र ऐंठन हो। यदि तपाईंले यी लक्षणहरू देखाउँनु भयो भने तत्काल चिकित्सकीय सहायता लिनुहोस्।
मेटफर्मिन घटाउन सक्छ भिटामिन बी १२ शरीरमा स्तरहरू। समयको साथ यसले भिटामिन बी १२ को कमी हुन सक्छ। भिटामिन बी १२ स्तरहरू प्रत्येक २ देखि years बर्षमा निगरानी गरिनुपर्दछ जब मेटफोरमिन लामो अवधि लिनुहुन्छ।
जेहुकै दुर्लभ भए पनि, मेटफर्मिनले हाइपोग्लाइसीमिया पैदा गर्न सक्दछ यदि ईन्सुलिन वा इन्सुलिन सेक्रेटोगोग जस्तै ग्लिपिजाइड वा रिप्याग्लिनाइडको साथ लिइन्छ। दुर्लभ मामिलाहरूमा, मेटफर्मिनले हाइपोग्लाइसीमिया निम्त्याउन सक्छ जब रक्सी वा अपर्याप्त आहारको साथ लिइन्छ।
मेटफर्मिन बनाम मेटफर्मिन ईआर बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
मेटफर्मिन भनेको के हो?
मेटफोरमिन वयस्कहरू र १० बर्ष र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूमा टाइप २ मधुमेह मेलिटसको उपचार गर्नका लागि सिफारिस गरिएको औषधि हो। तत्काल रिलीज मेटफोरमीन खानाको साथ प्राय: दुई पटक लिइन्छ। यो टाइप २ मधुमेह को लागी पहिलो लाइन उपचार मानिन्छ जब एक उचित संगै खाना र व्यायाम दिनचर्या ।
मेटफर्मिन ईआर भनेको के हो?
मेटफर्मिन ईआर मेटाफर्मिनको विस्तारित-रिलीज फारम हो। यसलाई ब्राण्ड नाम ग्लुकोफेज एक्सआर, ग्लुमेटा, वा फोर्ट्यामद्वारा पनि चिनिन्छ। मेटफर्मिन ईआर नियमित मेटफोर्मिन भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ र कम साइड इफेक्टहरू छन्। यो दिनको एक पटक साँझको खानाको साथ तोकिन्छ।
के मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर एकै हो?
होईन। Metformin र metformin ER एक समान छैन। मेटफर्मिन द्रुत रिलीज संस्करण हो जबकि मेटफर्मिन ईआर विस्तारित रिलीज संस्करण हो। मेटफर्मिनलाई वयस्क र १० बर्ष र अधिक उमेरका बच्चाहरूमा टाइप २ मधुमेहको उपचार गर्न अनुमोदन गरिएको छ जबकि मेटफर्मिन ईआर वयस्कहरूमा टाइप २ मधुमेहको उपचार गर्न मात्र स्वीकृत हुन्छ।
के मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर राम्रो छ?
मेटफर्मिन ईआर राम्रो विकल्प मानिन्छ किनकि यो दैनिक रूपमा एक पटक मात्र लिनु पर्छ। यो मेटफर्मिन भन्दा समान वा अधिक प्रभावकारी छ र केहि साइड साइड इफेक्टको सम्भावना कम हुन्छ।
alprazolam र xanax एउटै कुरा हो?
के म गर्भवती हुँदा मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर प्रयोग गर्न सक्छु?
मेटफर्मिन गर्भावस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभ जोखिम बाहिर जान्छ। पशु अध्ययन देखाउनुहोस् कि भ्रुणमा कुनै हानिकारक प्रभावहरू छैनन्। यद्यपि, जन्म दोषहरूको जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा मेटफोरमिन उचित छ कि छैन भनेर हेर्न डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
के म रक्सीको साथ मेटफर्मिन र मेटफर्मिन ईआर प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीको साथ मेटफर्मिन वा मेटफर्मिन ईआर लिनको लागि सिफारिश गरिदैन। रक्सी पिउँदा रगतमा चिनीको मात्रा परिवर्तन हुन सक्छ नतिजा hyperglycemia वा hypoglycemia को बढि जोखिम।
मेटफार्मिन एचसीएल ईआरको अर्थ के हो?
Metformin HCl ER ले एक विस्तारित रिलीज फॉर्मूलेसनमा मेटफोरमिन हाइड्रोक्लोराइड समावेश गर्दछ।
के मेटफर्मिन ईआर ग्लुकोफेज एक्सआर जस्तै हो?
मेटफर्मिन ईआरमा ग्लुकोफेज एक्सआरको समान सक्रिय तत्वहरू छन्। मेटफोर्मिन ईआर ग्लुकोफेज एक्सआर को सामान्य नाम हो।
लेवलबुटरोल बनाम अल्बुटेरोल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
कुन भिटामिनले इरेक्टाइल डिसफंक्शनमा मद्दत गर्दछ
के म रक्सी संग मेरो जन्म नियन्त्रण लिन सक्छु?
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यदि तपाइँको ल्याक्टोज असहिष्णु छ?
नाक भीड को लागी काउन्टर चिसो औषधि भन्दा राम्रो
Walmart4सूचीमा के औषधि छन्?